ဂွာဒီယိုလာ ဘိုင်ယန်အတွက် ထမ်းမပို့နိုင်ခဲ့တဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာကို ဖလစ်က ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မလား? – MySport Myanmar
ဂွာဒီယိုလာ ဘိုင်ယန်အတွက် ထမ်းမပို့နိုင်ခဲ့တဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာကို ဖလစ်က ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မလား?
ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ လမ်းခွဲပြီးနောက် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့နည်းပြသစ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ပတ်ဂွာဒီယိုလာဟာ ဘိုင်ယန်မှာ (၃)ရာသီအကြာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက် အသင်းရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားကို မရယူပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနဲ့ အလှမ်းဝေးနေခဲ့ရတဲ့ ဘိုင်ယန်ဟာ ဒီနှစ်မှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ်အောင်မြင်မှုကို ပြန်လည်မျှော်မှန်းနိုင်ဖို့အတွက် ကစားသမားပိုင်း ရလဒ်ပိုင်းတွေမှာ အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိနေတာကြောင့် ဒီရာသီရဲ့ King of Europe က ဘိုင်ယန်ဖြစ်လာနိုင်မလား…?
လက်ရှိမှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းက ဘွန်ဒစ်လီဂါနဲ့ ပိုကယ်ဖလားတို့မှာ ချန်ပီယံဆုတွေကို ဆွတ်ခူးထားနိုင်ခဲ့သလို အသင်းရဲ့လူအင်အားကလည်း အတောင့်တင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိနေပြီး အသင်းကို ပဲ့ကိုင်နေသူကလည်း တချိန်က အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟန်ဆီဖလစ်ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဖလစ်ဟာ နည်းပြဟောင်းကိုဗက်လက်အောက် ရလဒ်တွေဆိုးနေတဲ့ ဘိုင်ယန်အသင်းကို ဖလား(၂)လုံးအထိ ရအောင်ပြန်လည်ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ကာ အခုလည်း ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကြီးကိုပါ အရယူပေးဖို့ နီးစပ်လာခဲ့နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဘိုင်ယန်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ သူတို့အသင်းလိုပဲ ချန်ပီယံလိဂ်အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းနည်းနည်းဝေးနေရတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်လို့ ဆီမီးဖိုင်နယ်တတ်ရေးက လွယ်ကူဖွယ်မရှိသလို ဆီမီးရောက်ရင်လည်း လိုင်ယွန်နဲ့ မန်စီးတီးတို့ပွဲစဉ်က အနိုင်ရလာမယ့်အသင်း (မန်စီးတီးတတ်နိုင်ခြေများပါတယ်)နဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမှာဖြစ်လို့ ဘိုင်ယန်ရဲ့ဖိုင်နယ်လမ်းကြောင်းက စိန်ခေါ်မှုတွေ အတော်လေးကို များနေပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကြီးကိုပါ ရယူပေးနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ဖလစ်ဟာ ဂွာဒီယိုလာ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အရာကို ရအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လိုက်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်သလို ဂျက်ဟေးနက်နောက်ပိုင်း အသင်းအတွက် ဖလား(၃)လုံး ရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနည်းပြလည်း ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ ဒါက ဖလစ်အတွက်တော့ အရမ်းကို ချိုမြလွန်းတဲ့ အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်သလို အောင်မြင်မှုတွေကို အရမ်းဆာလောင်နေတဲ့ ဘိုင်ယန်အတွက်လည်း အခမ်းနားဆုံးအောင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်လာစေမှာပါ။ ဆိုတော့ ဒါတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာ…
MySport Myanmar2020-08-14T19:40:10+06:30August 14th, 2020|Champions League, Football|